ITS Tech School Featured Student - ITS Tech School Umfundi ovelele - ITS Tech School
I-ITIL v3 Foundation
I-ITIL Ukuphatha Kuyo yonke i-Lifecycle
Abasebenzi abasekelayo be-Gr8. umqeqeshi une-exprinace enhle ku-ITEM. Ikhwalithi yokudla engcono kakhulu. jikelele exprinace kahle kakhulu ngesikhathi sokuqeqeshwa
Isevisi Yesevisi Ephakathi ye-ITIL
Kwaba ukuqeqeshwa okumangalisayo nomqeqeshi onjalo omuhle kanye nemvelo yokufunda. Kwakungcono ukwazi ukuthi izinhlangano zisebenza kanjani ngaphakathi kanye nezinqubo ezihlobene. Ngaphezu kwalokho uMqeqeshi wayenolwazi kangangokuthi wachaza yonke into ngesineke futhi ngezibonelo ezisebenzayo okwangenza ngaziqonda konke ngakho konke kalula. Angikaze ngilindele ukuthi kube isipiliyoni esihle kangaka kodwa ngihlela ukwenza ezinye izitifiketi zami kusukela lapha kuphela. I-Cheers kanye nakho konke okuhle kunabo bonke abantu.
Kwakuyisikhathi esihle sokufunda. Ngiyethemba ukuthi sinezikhathi eziningi ezifanayo nalezi zenye imijikelezo yokuphila, zingathanda ukuya khona nokufunda.
Isikhungo saso esikhulu nabasebenzi bekhwalithi kanye nayo yonke i-Infra edingekayo. Isula isisekelo se-ITIL emzamweni wokuqala ngamamaki amahle.
Ncoma konke ukuthi ujoyine lokhu ngesitifiketi sabo.
ITIL- Design Intermediate Service
Ngenze isisekelo sami kanye ne-ITIL kusuka esikoleni se-ITS tech ngenyanga eyedlule ngokwayo. Ngathola uMphathi wezokuthengisa uMnu Sandeep nomqeqeshi kakhulu ukusiza ukuqonda inqubo ephelele futhi ngisho nokusiza ukuletha ithemba elizayo nabalingani. Ngibonga kubo bobabili futhi ngifuna ukusebenzisana okufanayo phakathi kwezifundo zami ezilandelayo ne-ITSTECHSCHOOL
Ubuchwepheshe buhle buboniswe yinhlangano yakho futhi konke okunikezwayo okwethenjisiwe kuzokwenziwa ukunakekelwa kahle.
Kuyintokozo ngempela ukuba neChikanna njengomfundisi wethu weSelenium. Ukutholakala kokuqukethwe okuhle okuphelele kwenkambo kanye nabafundisi bezobuchwepheshe kule ndaba kwenza kube mnandi kakhulu futhi kujabulise.
Umqeqeshi wayenomsebenzi onolwazi oluthe xaxa, wachaza lezi zihloko ngokuningiliziwe futhi wazikhipha imibuzo eminingi
jikelele kwaba ukuqeqeshwa okuhle
B 100 A, eNingizimu ye-1 yedolobha, eduze kweSignature Towers,
I-Gurgaon, HR, India – 122001